နျောစေးစေးထူး Save လုပျခံရလို့ ဂုဏျပွုလိုကျတဲ့ နမေငျး – Askstyle
နျောစေးစေးထူး Save လုပျခံရလို့ ဂုဏျပွုလိုကျတဲ့ နမေငျး
နိုငျငံကြျော သရုပျဆောငျ နမေငျးဟာဆိုရငျ ပရိသတျတှေ အားပေးမှုမြားစှာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျ ပါ။နမေငျးက တဈနိုငျငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ ပရိသတျတှေ စောငျ့ကွညျ့အားပေးနကွေတဲ့ Myanmar Idol season4သီခငျြးပွိုငျပှဲမှ ပွိုငျပှဲဝငျ နျောစစေ့ထေူ့း Save လုပျခံရလို့ ဂုဏျပွုစကားဆိုလိုကျတဲ့ အကွောငျးကို ပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ပွိုငျပှဲဝငျ နျောစစေ့ထေူ့း က တက်ကသိုလျ သီခငျြးနဲ့ ပွိုငျကွရာမှာ အရမျးအန်တရာယျမြားတဲ့ ထိုငျခုံမှာ vote အနညျးဆုံးပွိုငျပှဲဝငျဖွဈခဲ့ပွီး Save လုပျခံခဲ့ရတာကွောငျ့ ပွိုငျပှဲမှာ ဆကျလကျယှဉျပွိုငျဖို့ အခှငျ့အရေး ထပျမံရရှိခဲ့ပါတယျ။
အသံပါဝါကောငျးကောငျးနဲ့ Rock သီခငျြးတှကေို ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ သီဆိုနိုငျတဲ့ နျောစေးစေးထူး က တက်ကသိုလျ ကြောငျးသီခငျြးနဲ့ အကောငျးဆုံး သီဆိုနိုငျခဲ့ပမေယျ့ Vote နညျးတဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျ ၃ဦးထဲမှာ ပါဝငျခဲ့ပွီး သူမက Save လုပျခွငျးခံခဲ့ရတာကွောငျ့ နမေငျးက ခုလို ပွောထားပါတယျ။
နမေငျးက “လူကမန်တလေးစိတျကရနျကုနျ CongratulationsNaw Say Say Htoo. ညီမလေး ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျပျေါမှာ ပွောထားပါတယျ။
Myanmar Idol season4သီခငျြးပွိုငျပှဲမှ ပွိုငျပှဲဝငျ နျောစစေ့ထေူ့းကို ရှိသမြှအကုနျ ပုံအောပွီး Votes ပေးမယျလို့ ပွောထားတဲ့ နမေငျးရဲ့ ဂုဏျပွုစကားကို ပရိသတျတှေ သိရလောကျပွီ ထငျပါတယျ။ ကွညျ့ရူပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျနျော။
နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင် နေမင်းဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ အားပေးမှုများစွာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင် ပါ။နေမင်းက တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေ စောင့်ကြည့်အားပေးနေကြတဲ့ Myanmar Idol season4သီချင်းပြိုင်ပွဲမှ ပြိုင်ပွဲဝင် နော်စေ့စေ့ထူး Save လုပ်ခံရလို့ ဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင် နော်စေ့စေ့ထူး က တက္ကသိုလ် သီချင်းနဲ့ ပြိုင်ကြရာမှာ အရမ်းအန္တရာယ်များတဲ့ ထိုင်ခုံမှာ vote အနည်းဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Save လုပ်ခံခဲ့ရတာကြောင့် ပြိုင်ပွဲမှာ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။
အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ Rock သီချင်းတွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သီဆိုနိုင်တဲ့ နော်စေးစေးထူး က တက္ကသိုလ် ကျောင်းသီချင်းနဲ့ အကောင်းဆုံး သီဆိုနိုင်ခဲ့ပေမယ့် Vote နည်းတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် ၃ဦးထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး သူမက Save လုပ်ခြင်းခံခဲ့ရတာကြောင့် နေမင်းက ခုလို ပြောထားပါတယ်။
နေမင်းက “လူကမန္တလေးစိတ်ကရန်ကုန် CongratulationsNaw Say Say Htoo. ညီမလေး ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ပြောထားပါတယ်။
Myanmar Idol season4သီချင်းပြိုင်ပွဲမှ ပြိုင်ပွဲဝင် နော်စေ့စေ့ထူးကို ရှိသမျှအကုန် ပုံအောပြီး Votes ပေးမယ်လို့ ပြောထားတဲ့ နေမင်းရဲ့ ဂုဏ်ပြုစကားကို ပရိသတ်တွေ သိရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရူပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။